I-Earplusg Bandana abaxhasi kunye nefektri - China Earplusg Bandana abavelisi
Amadoda Abafazi i-Bandana Ihlobo loKhuselo lobuso elixhonywe kwiTyhubhu yeNdlebe Isikhafu Ice Silk Intamo yesixhobo seBreana
Iyahlanjwa kwaye iphinde isebenze, le yimaski yobuso eyenziwe ngesandla okanye isikhafu setyhubhu ikwaziwa njenge-gaiter yentamo / imaski yebhande. Zonke ezi zinto zenziwe e-China kwaye zinokunxitywa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Yigqoke njengesigqumathelo se-ski, intambo yomqala, i-balaclava, isigqubuthelo sobuso, iqhiya yentloko, ukhuseleko lwelanga, phantsi kwesigcina-ntloko / umnqwazi nokunye! Ilaphu lenziwe ukusuka kwi-95% ye-polyester ene-5% ye-spandex. Sizidayisa ngesandla kwaye sizakhele izikhafu ngokwethu eGolden, CO nakwiGreater Denver Area. Yonke into ihlolwe kathathu ukugcina i ...
Ipholiyesta yendlebe yokujikeleza intamo yokuhamba
Umyili weBandana ngendlebe yokuvala intamo
I-Bandana enendlebe yokujija intamo ye-ear gaiter ebusweni i-balaclava yamadoda
IBandana enendlebe yokujikeleza intamo
uyilo lomqhaphu wendlebe
I-Bandana enendlebe yeluphu yentamo yokujonga ubuso inombala oqaqambileyo
Isikhafu sobuso be-mask bandana durag entanyeni
I-Bandana yesiko enesiciko sendlebe esine-ear gaiter
I-Polyester indlebe yokuloba intamo yentsimbi uyilo olutsha